Ezona zenzo zibalaseleyo zi-6 ekufuneka uzilandele xa usakha iphepha lokungabhalisi | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 6, 2017 NgeCawa, uDisemba 10, 2017 Douglas Karr
Sabelane ngamanye manani izizathu zokuba kutheni abantu bengabhalisi kwiiimeyile zakho zentengiso okanye ezincwadini. Ezinye zazo zisenokungabi sisiphoso sakho, njengoko ababhalisi begcwele ii-imeyile ezininzi kangangokuba bafuna nje isiqabu. Xa umbhalisi efumana kwaye ecofa kwikhonkco elingabhaliseli kwi-imeyile yakho, wenza ntoni ukuzama ukubasindisa?
Kutshanje ndenze nje nge Sweetwater, indawo yezixhobo ezimanyelwayo ekumnandi ukusebenza nayo. Ndiphantse ndaziva ndonakele ndicofa ikhonkco elingabhaliswanga, kodwa andithengi rhoqo ngokwaneleyo ngeentengiso ze-imeyile ezifika rhoqo kwiintsuku ezimbalwa. Xa ndicofa ikhonkco elingabhaliswanga, nantsi into endiziswe kuyo:
Ipholile kangakanani loo nto? Endaweni yokungabhalisi kuyo yonke into, ndinciphisile ukuphindaphinda ukuya kanye ngenyanga.
Ukuba bendinokufumana eli phepha, kuya kufuneka ndilinike u-A +! Ayiboneleli kuphela ngeendlela ezinokuphindaphindwa, zisenza umsebenzi omkhulu wokundazisa ngento endinokuphoswa yiyo kunye nokuseta okulindelweyo nganye nganye. Oku kuyahambelana ne-infographic Epsilon ekhutshiweyo, Ukuhamba ngendlela kwi-Inbox, Ukuchonga iindlela ezi-6 ezilungileyo ekufuneka umthumeli we-imeyile azilandele xa ejongene nokungabhalisi:
Iinketho zonxibelelwano - yeka "konke okanye akukho" iphepha elingabhaliswanga kwaye unikeze indlela edibeneyo enika amanqanaba ahlukeneyo okuzibandakanya.
Cofa u-Cofa ukuze ubhalise -Ungakwenzi kube nzima ukuzikhupha. Impembelelo yokugqibela oyenzayo kumntu okubonelele ngethuba lokuthetha nabo ayikokucaphukisa ngokungabavumeli ukuba bahambe.
Sula ukuBhalisa - ubungakanani obuncinci befonti, ukufihla ngasemva kokungena, ukuqinisekisa iidilesi ze-imeyile… ukuyeka ukwenza kube nzima ukufumana nokungabhalisi. Ukuba abantu banqwenela ukuhamba, bayeke.
Ukucoca ababhalisi -Ukuba ufuna ukugcina ukubekwa kwebhokisi elungileyo engenayo kunye neemetwork zokuzibandakanya eziqinileyo, coca uluhlu lwakho lwababhalisile abangakhange babandakanyeke ngaphezulu konyaka (okanye ngaphezulu ukuba unamaxesha onyaka).
Ithuba lokugqibela -Ngaphambi kokuba ucoce ababhalisile abangabandakanyekanga, babenzele ithuba lokugqibela ukubona ukuba bangathanda ukuhlala.
Fumana ingxelo - njengomzekelo ongentla, bendingashiyi iSweetwater… Bendingafuni ii-imeyile zabo rhoqo. Sukuyithatha buqu xa umntu obhalisileyo eshiya. I-inbox yanamhlanje igcwele kwaye kunzima ukuyilawula, abathengi bakho banokufuna ukugcina izinto zicocekile ngakumbi. Ukuba unomdla wokuba kutheni ushiyekile, babuze kwiphepha lakho lokungabhalisi.
Ukuhambahamba kwi-inbhokisi: Ungabhalisi
tags: Ubume be-imeyileepsilonfrequencyuluhlu lucocecoca ababhalisileizizathu zokungabhalisiamanzi amnandiungabhalisiungabhalisi iphepha
Kutheni le nto iNkampani yakho ifanele ukuba iphumeze incoko ebukhoma